हिमानी शाह लेख्छिन् – रुदैनन् कहिले जल्नेहरु ! रुन्छन् त केवल जलाउनेहरु ! - हाम्रो देश
हिमानी शाह लेख्छिन् – रुदैनन् कहिले जल्नेहरु ! रुन्छन् त केवल जलाउनेहरु !
पूर्व युवराज पारस शाह र सोनिका रोकायाबीचको सम्वन्ध मिडियामा आएपछि पुर्व युवराज्ञी हिमानी शाह लगातार फेसबुकमा स्टाटस लेख्न थालेकी छिन् । आजमा मात्रै उनले २ वटा स्टाटस लेखेकी छिन् ।
पुर्व युवराज्ञी हिमानी शाहले फेरी अर्को भावुक स्टाटस लेखिकीछन् । आफ्नो फेसबुकमा उनले मृ त्युसंग जोडेर अर्को स्टाटस लेखेकी हुन ।
जाऊ आर्यघाटमा गई नियालेर हेर ??
रुदैनन् कहिले जल्नेहरु !!
रुन्छन् त केवल जलाउनेहरु !!
यहाहरुको पल शुभ रहोस्
हिजो मात्र ताजा समाचारमा कठै ! हिमानी राज्यलक्ष्मी शाह शीर्षकमा एक समाचार लेखिएको थियो । जुन समाचारको मुख्य सार थियो । नारि सबै बाढ्न सक्छिन तर श्रीमान कहिल्यै बाढ्न सक्दिनन्। हिमानीले कसरी सहेकी होलिन यो पिडा?’ एउटा बिबाहित नारिलाई यो भन्दा ठुलो पीडा के होला?